Kamboodiya waxay ku dhawaaqeysaa xayiraadaha soo gelitaanka, waxay mamnuucday dalxiisyada caalamiga ah ee wabiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Ammaanka » Kamboodiya waxay ku dhawaaqeysaa xayiraadaha soo gelitaanka, waxay mamnuucday dalxiisyada caalamiga ah ee wabiga
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Cambodia Breaking News • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dowladda Cambodia ayaa ku dhawaaqday mamnuucid soo galitaanka muwaadiniinta shan wadan: Italy, Germany, Spain, France, iyo USA, taasoo bilaabaneysa Maarso 17, 2020 muddo 30 maalmood ah.
Sidoo kale, dhammaan doomaha wabiyada caalamiga ah waa laga hor istaagay inay soo galaan Cambodia laga bilaabo Maarso 13keeda ilaa ogeysiis dambe.
Hadda ma jiraan wax xannibaad ah oo ku saabsan safarka gudaha Cambodia, iyo dhammaan goobaha dalxiisku waa u furan yihiin sidii caadiga ahayd.
Marka loo eego kiisas caalami ah oo ay la socoto Xarunta Sayniska Sayniska iyo Injineerinka (CSSE) ee Jaamacadda Johns Hopkins, Cambodia waxay leedahay 4 kaliya oo firfircoon. Fayruuska corona kiisaska.
fayruuska xanuunka musiibada ah ee Corona Italy travel